Iseluleko Esihle Kakhulu Samasu Wokuphumelela Wokuqukethwe Kweminyaka Eyinkulungwane | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 7, i-2018 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 7, i-2018 Stacey Wonder
Izwe lamavidiyo wekati, ukumaketha ngegciwane, nento enkulu elandelayo. Ngawo wonke amapulatifomu aku-inthanethi ukufinyelela abathengi abangaba khona, inselelo enkulu ukuthi ungakwenza kanjani yenza umkhiqizo wakho uhambisane futhi uthandeke emakethe yakho ehlosiwe.
Uma imakethe yakho eqondiwe ingu-millennials khona-ke unokuthola umsebenzi onzima nakakhulu onakekela izidingo zesizukulwane esichitha amahora ngosuku emithonjeni yezokuxhumana futhi esingaphazanyiswa ngamasu wokukhangisa wendabuko.
Isizukulwane esazi kahle ukuthi sifunani futhi esingakhokheleli lutho olungaphansi siyisixuku… esinzima. Ngaphandle kwalokhu, akunakwenzeka dala amasu wokukhangisa asebenzayo abhekise eminyakeni eyizinkulungwane, kudinga nje indlela entsha yokuxhumana nabo.
Uma uzama ukufinyelela eminyakeni eyizinkulungwane zeminyaka kunezinto ezimbalwa okufanele uzigweme uma ufuna ukuba nomkhankaso wokumaketha ophumelelayo:
Okuqukethwe Okususelwa Kombhalo Kakhulu
Izikhangiso ezikwi-TV nakumaphephandaba
Lezi zinto zivamise ukuqeda iminyaka eyizinkulungwane kude nenkampani noma umkhiqizo. Abathandi ukutshelwa ukuthi bathenge ini ngendlela efanayo nezizukulwane ezedlule ezaphendula kahle kubukhazikhazi nobukhazikhazi besikhangiso esibekwe kahle nenkundla yokuthengisa esobala.
Izinto ezintathu zibalulekile ekwakheni isu lokumaketha elisebenza kahle lezinkulungwane zeminyaka. Kumele: Bandakanya, Jabulisa, futhi Ufundise.
Ukwenza iminyaka eyizinkulungwane:
Amawebhusayithi ezokuxhumana nabantu afana ne-Instagram, i-Snapchat, i-Twitter, ne-Youtube asetshenziswa Amapulatifomu alungele ukuthumela nokukhuthaza okuqukethwe okubukeka kumangalisa, okwabelwana ngakho, futhi okubaluleke kakhulu, okulandelanayo.
Muva nje, AbakwaHonda benze umkhankaso wokumaketha ophumelele kakhulu obhekiswe ezinkulungwaneni zeminyaka eyizinkulungwane ngokusebenzisa izihlungi ze-Instagram nochungechunge lwe-SnapChats okwabiwe ngalo njengomlilo wequbula. Indlela yabo yabavumela ukuthi bakhe okuqukethwe okuphindaphindekayo nokwabekayo ngendlela yesimanje neyenhlalo efanele ngaphandle kokucindezela kanzima ekuthengiseni.
UWendy ugcina i-akhawunti esebenzayo ye-Twitter evame ukuphendula imibuzo yamakhasimende ngayo amahlaya ahlakaniphile, abukhali futhi ahlakaniphile. Lolu hlobo lwe- “trolling” luyitshe legumbi lesiko lamanje lezinkulungwane zeminyaka futhi ukubandakanya isisekelo sakho seminyaka eyinkulungwane ngale ndlela ukubheja kwakho okuhle ngokuthepha kulesi sisekelo sabathengi esifunwa kakhulu.
Enye yezinto eziyinhloko ekwakheni i- amasu wokukhangisa asebenzayo futhi aphumelelayolokho okubhekiswe eminyakeni eyizinkulungwane ngokuzibandakanya ngenkuthalo ezinkundleni zokuxhumana abathanda ukuzisebenzisa. Ngokwenza lokhu uthatha isinyathelo sokuqala sokukhulisa isisekelo samakhasimende akho nokuhlangabezana nezinhloso zakho zokusebenza kanye nokuqagela kwenzuzo.
Iminyaka Eyinkulungwane Ejabulisayo
Amavidiyo abe yi-juggernaut yokumaketha nezinkampani chitha izigidi zamadola ngonyaka ekukhangiseni kwamavidiyo kumawebhusayithi nakuzinkundla zokuxhumana. Kepha isitayela sakho esivamile salokhu-ukuthi-yilokhu-ukuthi-thina-futhi-lokhu-ukuthi-sithengisa-ini kokuthengisa kwevidiyo ngeke kwenze lutho ukujabulisa isisekelo samakhasimende seminyaka eyinkulungwane.
Amavidiyo wegciwane a ingxenye enkulu yokumaketha futhi ukudala ividiyo eba yinto enkulu elandelayo kuyindlela engcono yokujabulisa nokuheha isisekelo samakhasimende akho seminyaka eyinkulungwane. Ngamahora angaphezu kwe-4 ngosuku asetshenziswe kumafoni abo, kuphephile ukusho ukuthi izinkulungwane zeminyaka ziyayithanda ividiyo enhle. Amakati, yehluleka, isatires, ukuxutshwa kabusha kwezindaba zezindaba, ukufundwa kwezindebe ezimbi, ungakusho nje ukuthi bakubukile
Izinkampani eziningi ezifana ne-Old Spice neGoDaddy zaziwa kakhulu ngezikhangiso zevidiyo eziphezulu ezihlala zibonga igciwane ngenxa yobungqingili babo, ubulili, ukuhlekisa, futhi kwesinye isikhathi phansi-kwesokudla-real-world-realness.
Futhi akuwona nje amavidiyo manje!
Futhi ngenkathi ividiyo emnandi ehlekisayo is indlela enhle yokubandakanya izilaleli zakho zeminyaka eyizinkulungwane, iqiniso ukuthi akuyona i- indlela kuphela. Ukujabulisa izithameli zakho zeminyaka eyizinkulungwane kungatholwa nangezindatshana ezimfishane ezihehayo ezihlobene nezinkolelo zabo, izingqinamba zomphakathi, kanye nezindaba zomhlaba wangempela. Abantu abaningi, kuhlanganise Izinkulungwane zeminyaka khetha izindaba ezimfishane nezihehayo ezibaphoqa ukuthi bafunde lonke ucezu. Uma ungakwazi ukudala okuqukethwe kokubhala okudala okudingayo ukuze uthande futhi ujabulise izithameli zakho eziqondisiwe, ungahle ucabangele ukufuna ababhali abazimele kuzingxenyekazi ezifana nazo Kuyaqhubeka noma uqashe ababhali abavela kuzinsizakalo ezifana Ama-EssayTigers.
Izihlungi, ama-meme. ama-boomerang, izitika, i-clickbait, nemidlalo yeselula konke sekuyizindlela eziphumelelayo zokukhomba izethameli ezingavikelekile kumasu ajwayelekile wokumaketha. Lezi zinhlobo ezingeziwe ze-akhawunti yezokuzijabulisa yezigidi zokuthandwa namasheya akhuthaza ngobuqili umkhiqizo wakho ngaphandle kokuwuphoqa ukuthi abe umphimbo wamakhasimende angaba khona.
Kodwa-ke unquma ukujabulisa ikhasimende lakho lenkulungwane yeminyaka ngecebo lakho lokumaketha, vele uqiniseke ukuthi ulandela le mihlahlandlela elula:
Kwenze kwabelwane ngakho!
Kwenze kube Okuhlekisayo!
Kwenze kube okwangempela!
Ukufundisa Iminyaka Eyinkulungwane
Ukufundisa izinkulungwane zeminyaka ngezinzuzo zomkhiqizo yingxenye yokugcina okufanele ibhekwe lapho kwenziwa amasu wokukhangisa asebenzayo ezinkulungwaneni zeminyaka eyizinkulungwane. Lapho i-millennial yazi ngokwengeziwe ngenkampani nomkhiqizo wakho - kusuka ukuthi yakhiwa kanjani kuye lapho inzuzo iya khona - maningi amathuba okuthi benze isinqumo sokuthenga kuwe.
Cabanga ngokwakha amasu wokumaketha, ngaphezu kwezinye izinhloso zakho, fundisa i-target base yakho yeminyaka eyizinkulungwane ngezinzuzo ukongiwa kwemvelo, amalungelo esintu, noma umsebenzi wokupha lapho inzuzo evela kumkhiqizo iqonde ngqo ekusizeni. Ngaleyo ndlela, izinkulungwane zeminyaka zizwa amandla okuthenga kwazo ngaphandle kwecala lokuzisebenzisa.
Inkampani yezingubo iPatagonia isanda kunikela inzuzo yosuku lonke yokuthengiswa kwabo kweBlack Friday ekusizeni. Ukuthengisa kwabo bekungena ngophahla futhi isu labo lokumaketha lithembele kakhulu ezinkulungwaneni zeminyaka ezixhuma nembangela nokwabelana ngolwazi nabangane nabalandeli.
Ngisho nenselelo ye-ALS Ice Bucket yayiyindlala umkhankaso wokumaketha ophumelelayo leyo mfundo exubekile ngomnikelo wokupha ngendlela emnandi nejabulisayo okwakulula ukuyakha futhi yanikeza ithuba lodumo lwe-inthanethi. Ekugcineni, inhlangano yaqoqa imali engaphezu kwama- $ 115M eminikelo.
Ezinye izinkampani zilandele amasu afanayo okukhangisa nokukhangisa ngokwenza izinkulungwane zeminyaka zazi ngomsebenzi wazo wokupha, zizivumelanisa nemikhankaso eqhubekayo yokuthengisa kubantu abathandana nabobulili obubodwa nabezinhlanga ezimbili, futhi zize zithuthukise nezinqubomgomo nezinkambiso zazo zokuqasha amakhasimende azi ngemiholo yokuncintisana nephilayo. nezinzuzo ezikhokhelwa bonke abasebenzi bazo.
Ukufaka imfundo kucebo lakho lokumaketha ngu kubalulekile ekufinyeleleni eminyakeni eyizinkulungwane. Lapho ukwazi ukuwaxhuma ngokwengeziwe nezici ezahlukahlukene zomkhiqizo noma inkampani, kuba lula ukudala ukwethembeka kwesikhathi eside futhi ngokuqhubekayo ukuthengisa imikhiqizo kubo ngempumelelo.
Ungayenza Kanjani Isebenze!
Ngenkathi ukubeka umgwaqo womkhankaso wokumaketha ophumelelayo ohlose izinkulungwane zeminyaka kulula, inqubo yokuwufeza empeleni izodinga umsebenzi omningi njengoba yonke imikhiqizo, uhlobo lwayo nenkampani yehlukile.
Qala ngokucwaninga ngamasu wokumaketha aphumelele (futhi aze ahluleka) asetshenziswe ezinye izinkampani. Funda ukuthi bakwenze kanjani, basebenzise maphi amathuluzi nokuthi bakwazi kanjani bahlanganyele, bajabulise, futhi bafundise amakhasimende abo ezinkulungwane zeminyaka.
Isimo esibi kakhulu, qasha iminyaka eyinkulungwane noma amabili ukukunikeza ukuqonda okudingayo kulokho okufunwa futhi okungafunwa omunye wabantu abafuna kakhulu.
Tags: ehlungamemes. ama-boomerangukuqalastickers
UStacey Wonder ungumakethi wokuqukethwe onolwazi futhi ungumbhali ozimele. UStacey udale inqwaba yamabhulogi weminyaka eyizinkulungwane ezihlokweni ezihlobene nemfundo, ukuzithuthukisa, umsebenzi wokukhangisa, nokumaketha. UStacey uhlala ezama ukuthuthukisa amakhono akhe obuchwepheshe futhi ahlanganyele nabanye izindlela ezinhle kakhulu. Lapho engaxakekile ngamaphrojekthi akhe, uStacey ubhala izindaba ezimfishane zabaseshi.